what, when, why: आजकालका नेपाली तात्ताता (Hot) मोडेलहरु
आजकालका नेपाली तात्ताता (Hot) मोडेलहरु
अहिले हाम्रा मोडेलहरु कोही भन्दा कोही काम छैनन । सबै एक सा एक छन , रुपमा होइन Expose गर्नमा । बलिवुडलाई त के हलिवुडलाई समेट मात दिने भईसके मोडलिङग गर्दा Expose गर्नमा । खै यसलाई राम्रो भन्ने कि नराम्रो ? समय अनुसार हिंड्नै पर्‍यो भन्छन तर नराम्रो कुरा भन्दा राम्रो कुराहरु समय अनुसार सिकेको भए हामी नेपाली भनेर शिर उचाली भन्न गर्ब लाग्थ्यो तर यसको ठीक उल्टो भई राखेको छ ।
ल तपाईं आँफै हेर्नुहोस् आजकालका मोडेल भनाउदाहरुलाई र मुल्याङ्कन पनि आँफै गर्नुहोस् ....
( फोटोहरुलाई ठुलो पारेर हेर्न चाहनु हुन्छ भने यहाँ क्लिक गर्नुहोला )
yo ta anga pradasan na bhai sa-sana kapada pradsan bhayana ra? j pradasan ko uddesya ho thye po pradasan garnu parchha ta nani haru le ..,,, ki kaso ?